ဇီးကွက် နက်ဗျူလာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 11h 14.8m 00s, +55° 01′ 00″
11° 14′ 47.734″
၂,၀၃၀ ly (၆၂၁ pc) ly
၀.၉၁ ly (၀.၂၈ pc) ly
ဇီးကွက်မျက်လုံးနှင့်တူသည်ကို တယ်လီစကုပ်ကြီးဖြင့် မြင်နိုင်သည်။
ဇီးကွက် နက်ဗျူလာ (Messier 97,M97, NGC 3587) သည် ကြယ်စုတန်း အာရှာ မေဂျာမှ အလင်းနှစ် ၂၀၃၀ အကွာ၌ တည်ရှိပြီး ယင်းအား ပြင်သစ် နက္ခတ္တပညာရှင် Pierre Méchain ဆိုသူမှ ၁၇၈၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ၁၈၄၈ ခုနှစ်တွင် ဝီလီယံ ပါဆင်ဆိုသူမှ ယင်းအား ဇီးကွက်ဦးခေါင်းနှင့်တူသောကြောင့် ဇီးကွက် နက်ဗျူလာဟု အမည်တွင်စေခဲ့သည်။ နက်ဗျူလာသည် သက်တမ်းအားဖြင့် ၈၀၀၀ နီးပါးခန့် ရှိသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Kerber၊ F.; et al. (September 2003)၊ "Galactic Planetary Nebulae and their central stars. I. An accurate and homogeneous set of coordinates"၊ Astronomy and Astrophysics၊ 408: 1029–1035၊ Bibcode:2003A&A...408.1029K၊ doi:10.1051/0004-6361:20031046.
↑ ၂.၀ ၂.၁ Stanghellini၊ Letizia; et al. (December 2008)၊ "The Magellanic Cloud Calibration of the Galactic Planetary Nebula Distance Scale"၊ The Astrophysical Journal၊ 689 (1): 194–202၊ doi:10.1086/592395.
↑ Cuesta၊ L.; Phillips၊ J. P. (November 2000)၊ "Excitation and Density Mapping of NGC 3587"၊ The Astrophysical Journal၊ 120 (5): 2661–2669၊ Bibcode:2000AJ....120.2661C၊ doi:10.1086/316800.
↑ Jones၊ Kenneth Glyn (1991)၊ Messierś Nebulae and Star Clusters (2nd ed.)၊ Cambridge University Press၊ pp. 277–279၊ ISBN 0521370795.
↑ Clark၊ Roger Nelson (1990)၊ Visual Astronomy of the Deep Sky၊ CUP Archive၊ ISBN 0521361559.
The Owl Nebula at Calar Alto Observatory Archived 24 May 2011 at the Wayback Machine.
Norton၊ Andy။ M97 – Owl Nebula။ Deep Space Videos။ Brady Haran။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဇီးကွက်_နက်ဗျူလာ&oldid=623645" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၄:၂၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။